ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ပြဿနာ | MoeMaKa Burmese News & Media
“မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဆိုတာက မူလကတည်းက စုပေါင်းပြီးတော့ တိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ သူ့နယ်မြေ ကိုယ့်နယ်မြေ ရှိတယ်။ သူ့အဖွဲ့က သူ့နယ်မြေနဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် စုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ပုံစံ တိုက်ခိုက်တာမျိုး မရှိဘူး။ မြောက် ပိုင်းမဟာမိတ် ဆိုတာပြန်ပြီး မရုပ်သိမ်းသေးတဲ့အတွက် ဒီတိုက်ပွဲ မှာလည်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လို့ ပြောရင် လည်း ပြောလို့ ရသေးတယ်။” ဟု သူကဆိုသည်။
အနှစ်ချုပ် သုံးသပ်ရလျှင် မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာသည် ၁၉၄၇ ပင်လုံ ကတိက၀တ်မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး” ဆိုသည့် ကတိ ပျက်ကွက်ရာမှ စတင်သည့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် မရှင်းသမျှ အဖြေရမည်မဟုတ်ပါ။ စစ်အင်အားဖြင့် ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်ပါ။ အမြစ်ပြုတ် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန်လည်း မဖြစ်သင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယခု နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း ဘယ်သူကမျှ အပြုတ်တိုက် ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် ဥပမာကို ကြည့်ပါ။ ရလဒ်မှာ တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်းဘဲ၊ စစ်ဒဏ်ကြောင့် သေကြေအနာတရဖြစ် ကာ ဆင်းရဲမွဲတေ ခြင်းသာ အဖတ်တင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ဒုက္ခမျိုးစုံကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားရသည့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုအောက်တွင် အပြန်အလှန် ရန်လိုတိုက်ခိုက်နေကြရသည့် “ဆိုးမွေ”ကို နောင်မျိုးဆက်တို့အား မပေးသင့်ပါ။ ဆရာဇော်ဂျီ၏ ‘သင်သေသွားသော်’ …ဆိုသည့် ကဗျာတွင်…. ..(သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည်၊ အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။) ဟု ဆိုဆုံးမခဲ့သည် ကို နာကြားလျှက်၊ လက်ရှိ ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာ ရယူထားသော ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ သေပြီးသည့်နောက် ‘ဆိုးမွေများ’ ချန်ခဲ့ကြ မည်လား။ ‘ ကောင်းမွေများ’ ချန်ခဲ့ကြမည်လား…. လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းသာယာစေရန် စေတနာသန့်သန့်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးကြစေလိုသည်။